မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam မန္တလေးသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိခြင်း - Mandalay Catholic Archdiocese
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam မန္တလေးသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိခြင်း
posted 1 May 2013, 08:53 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 1 May 2013, 09:04 ]
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ မန္တလေး Sacred heart Cathedral သို့ 8.4.2013 နေ့ ည 6:30 နာရီတွင် ရောက်ရှိလာရာ ကျောင်းထိုင်ဖာသာရ် Philip ဘရွှေမှ ခရစ္စတူးကားတိုင်၊ မေတ္တာရေ၊ လော်ဗန် နံ့သာဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့၏။
Fr. John စိုးတင့်မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍အဖွင့်မေတ္တာ သီဆိုခဲ့၏။ မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်မှ Welcoming Address နှင့် သမိုင်းကြောင်း၊ ဘာသာဝင်ဦးရေ၊ ရဟန်းတော် 46 ပါး၊ religious (13)ဂိုဏ်း၊ Lasalate Fathers များ၊ Salesians Fathers များ၊ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအကြောင်း တင်ပြခဲ့၏။
Sister နှစ်ပါးမှ Delegate အား ပန်းစည်းနှင့် လက်ဆောင် ဆက်သခဲ့၏။
မန္တလေးဗဟိုလူငယ်များမှ နှုတ်ဆက်တေးဖြင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့၏။ Apostolic Delegate မှ ကိုးရီးယားစကားဖြင့် မင်္ဂလာပါ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်သို့ ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိခြင်း၊ Pope ရွေးချယ်ခြင်း၊ Pope Francis ရွေးချယ်ခံရခြင်း၊ လက်တင်အမေရိက၊ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ ဖြစ်၍ နှိမ့်ချခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကားမစီးခြင်း၊ နေ့လည်၊ ညစာကိုယ်တိုင် စီစဉ်ခြင်းနှင့် Universal Churchအတွက် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရားထံ ဆုတောင်းပေးရန် မိန့်ကြားခဲ့၍ Fr. Marcoမှ မြန်မာလို ဘာသာပြန် ပြောကြားခဲ့၏။ Delegate ၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံယူပြီးနောက် ဘာသာတူများမှ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြ၏။
Apostolic Delegate Archbishop Paul Tschang In Nam၊ မန္တလေး ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ပေါလ်ဂရောင်၊ ဖာသာရ်များ၊ စစ္စတာရ်များ၊ သာသနာအကျိုးဆောင်များ၊ ညစာ တပျော်တပါး သုံးဆောင်ခဲ့ကြ၏။